Domaine Musungo Gevrey Chambertin Ostrea 2018
"Simba uye finesse"
Inosanganisa nyasha nesimba, inobatanidza simba nefinesse uye neese aya hunhu hunopesana, kana hwayananiswa, inoumba systisis inoyemurika yekupa kwakasiyana uye kunaka kwakakwana.
Dzakaomarara, dzakapusa uye dzakasimbiswa zvakanyanya, nzvimbo dzeGevrey-Chambertin dziri pakati pevanonyanya kuzivikanwa muBurgundy. Chikonzero chacho chiri nyore. Iyo yakakura nzvimbo, iyo inotora mune isingasviki 450 mahekita, inopa yakasarudzika uye isingawanzo misiyano yeivhu iyo inotangira kubva kuLias ivhu pamateru kusvika kune chalky gravel. Kubva pane idzi ivhu waini ine mraba yakatenderera inozvarwa!
Ngationgororei nzvimbo idzi pamwechete, idzo dzakambosarudzwa nerudo, dzinoumba musha weGevrey-Chambertin. Ngatitangei nekutanga kwavo. MuDérée, nzvimbo yakanaka kwazvo, iri pakati pechikomo chakatarisana nemusha mudiki weBrochon, wakafumurwa uye wakasvinwa, inoumba chimiro chine simba cheGevrey yedu. Zita rayo rinogona kunge rakamutsa "gwenga" munguva dzeGaulish kana ivhu risina hanya nekurima nekuda kwekuoma kuri kuita kurishandisa.
Iyo nzvimbo inozivikanwa seChampérrier, muvakidzani weiyo yekutanga, inotipa isu waini izvo zvinoita kuti vanhu vashamisike nekuwanda kwavo uye magadzirirwo avo. Ndiwo muchero wekare weGevrey, wakasimwa naPierre Arthur Trapet muna1919.
Ngatiswederei pedyo nenhare yekare uye pakati peGevrey, pane yedu Clos de Combe. Yakakomberedzwa nemadziro akaoma- akaoma matombo, inotipa yakasimba, mavara ewaini akazara-uye anonaka. Izwi rekuti "Combe" rinoreva pano kune nzvimbo iyo kununurwa kuri mukati uye mukati maro.
Munzira yekuGreat Vintages, iyo Petite Jouise inoratidzira yakanaka yayo "queulles" yeanopfuura makore makumi mashanu ekuberekwa. Zita rayo rinoratidzira kuvapo kwemaforogo anotarisa-akaipa muMiddle Ages. Munzvimbo ino kururamisira kwaiitwa. Iyi mazambiringa nerufaro akarasikirwa nemaforogo emapuranga, mazuva ano akatsiviwa nemateki anotsigira muzambiringa wemazambiringa wefaindi yakanaka.
Ngatipedzei kushanya kwedu nenzvimbo inonzi Vigne Belle: nzvimbo ine muzambiringa wakanaka uye unobudirira.
Kushuvira kusingaperi kwemugadziri wewaini. Muzambiringa wakanaka une mashanga ane hunyengeri unoita kuti muto wevhu redu unzwisisike.
3 ha, 8 zvikamu